Bay leaf (ကရဝေးရွက်) | Mizzima Myanmar News and Insight
ကရဝေးရွက်ဆိုတာက အမြဲစိမ်းအပင်တစ်မျိုးကနေရရှိတဲ့ အနံ့မွှေးကြိုင်တဲ့ မြေထဲပင်လယ်ဒေသ မျိုးရင်းပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် အသုံးများသလို အမွှေးနံ့သာအဖြစ်နဲ့ ထည့်သွင်းအသုံးပြုတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
ကရဝေးရွက်ရဲ့အရသာက အနံ့စူးရှပြီး ခါးသက်သက်အရသာရှိပါတယ်။ ကရဝေးရွက်ရဲ့ အနံ့နဲ့အရသာက သစ်ကြံပိုးခေါက်ရဲ့ အနံ့အရသာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပေမယ့် ကရဝေးရွက်ရဲ့ အနံ့အရသာက သစါကြံပိုးခေါက်လောက်တော့ မပြင်းပါဘူး။ ကရဝေးရွက်ကို အစိမ်းဖြစ်ဖြစ်၊ အခြောက်ခံပြီးဖြစ်ဖြစ် အမှုန့်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကရဝေးရွက်ရဲ့အဆီက ဆေးဖက်ဝင်ပြီး အသေးစားဖျားနာမှုတွေကို ကုသဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကရဝေးရွက်က ခါးသက်သက် အရသာရှိတာကြောင့် ဟင်းပွဲတွေထဲမှာပဲ ဟင်းခတ်အမွှေး အကြိုင်အနေနဲ့ ထည့်သွင်းစားသုံးပါတယ်။ ကရဝေးရွက်ကို ဟင်းပွဲတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းစားသုံးနိုင်တဲ့ အပြင် ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ မှိုပိုးတွေကို သေစေနိုင်တဲ့အစွမ်းအာနိသင်၊ ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းအာနိသင်၊ ဆီးရွှင်စေနိုင်တာနဲ့ သွေးတိတ်စေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိ တွေကြောင့်လည်း လူသိများပါတယ်။
ကရဝေးရွက်မှာ အပင်ကနေရရှိတဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတွေ၊ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေများစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် အကျိုးပြုပါတယ်။ ကရဝေးရွက်ကနေ ရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေနဲ့ သတိပြုစရာလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကရဝေးရွက်ကအမျိုးအစား – ၂ ဆီးချိုရောဂါကို ကုသရာမှာထိရောက်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။ ကရဝေးရွက်က သွေးတွင်းသကြားဓာတ်၊ ကိုလက်စထရောနဲ့ triglyceride ပမာဏတွေကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ကရဝေးရွက်မှာပါတဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုထိရောက်စေနိုင်တာကြောင့် သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကိုကျဆင်းစေပြီး နှလုံးရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အမျိုးအစား – ၂ ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေနဲ့ အင်ဆူလင်အစွမ်းသတ္တိကိုသိရှိခံစားမှုလျော့ကျလာခြင်း (insulin resistance) လက္ခဏာတွေ ခံစားနေရသူတွေ စားသုံးပေးဖို့သင့်တော်ပါတယ်။
ကရဝေးရွက်က အစာကျေချက်မှုကို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သလို ရင်ပူတာနဲ့ လေပွတာလိုမျိုး အစာချေစနစ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ကရဝေးရွက်က ဝမ်းချုပ်တာ၊ အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်တာနဲ့ အူမကြီးဆိုင်ရာ ဝေဒနာတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ ကရဝေးရွက်မှာပါတဲ့ အင်ဇိုင်းတွေက ပရိုတင်းဓာတ်တွေကို ဖြိုခွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ကရဝေးရွက်က အစာစားချင်စိတ်ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တာကြောင့် အဖျားရောဂါတွေကနေသက်သာစေပါတယ်။
ကရဝေးရွက်မှပါတဲ့ အင်အားပြည့်ဝတဲ့ phytonutrient ကရုတ်တရက် နှလုံးရပ်တာနဲ့ လေဖြတ်တာလိုမျိုး နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကရဝေးရွက်မှာ နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပြီး နှလုံးရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို တိုးတက်စေတဲ့ rutin၊ salicylates၊ caffeic အက်ဆစ် နဲ့ phytonutrient တွေလိုမျို းကျန်းမာရေးအတွက် အဖိုးတန်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတွေပါဝင်နေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးတတ်သူတွေနဲ့ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
၄. အဖျားရောဂါနဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကို သက်သာစေခြင်း
ကရဝေးရွက်မှာအအေးမိတာ၊ တုပ်ကွေးနဲ့ ကူးစက်ရောဂါလက္ခဏာတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းအာနိသင်ရှိပါတယ်။ ချောင်းဆိုးတာနဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေအတွက်လည်း အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ အဖျားကျစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းလည်းရှိပါတယ်။
ကရဝေးရွက်က ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတာကြောင့် အဆစ်လွဲခြင်း၊ ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်တွေ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဒူလာရောဂါတွေကို သက်သာစေနိုင်သလို နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကို သက်သာလျော့ပါးစေပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး စိတ်ခံစားမှုကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အဆစ်အမြစ်တွေ နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ကရဝေးရွက်မှာ ကင်ဆာရောဂါတွေကို ခုခံတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်စွမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ chemo-protective အစွမ်းသတ္တိတွေရှိတဲ့ caffeic အက်ဆစ်၊ quercetin၊ euganol နဲ့ catechin တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ကရဝေးရွက်မှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဆဲလ်တွေပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ဟန့်တားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ parthenolide လို့ခေါ်တဲ့ phytonutrient ပါဝင်နေပါတယ်။
၇. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာလည်း အထောက်အကူပြုပေးခြင်း
ကရဝေးရွက်မှာ ဖောလစ်အက်ဆစ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် ၃ လအလိုနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၃ လအတွင်းမှာ စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် သန္ဓေသားအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ကလေးငယ်မှာ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကရဝေးရွက်မှာ သန္ဓေအောင်စေနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။
၈. ရာသီသွေးဆင်းတဲ့ပြဿနာတွေကို သက်သာစေခြင်း
ကရဝေးရွက်က ရာသီသွေးကိုပုံမှန်ဆင်းစေပါတယ်။ အဖြူဆင်းတာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။
အိပ်ရာဝင်ခါနီး ကရဝေးရွက်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀. နှာခေါင်းသွေးလျှံတာကို တိတ်စေခြင်း
နှခေါင်းသွေးလျှံရင် ကရဝေးရွက် အစို (သို့) အရွက်ခြောက် သန့်သန့်ကိုခြေပြီး ရှုပေးပါက သွေးတိတ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကရဝေးရွက်အမှုန့်နဲ့ သွားတိုက်ပေးမယ်ဆိုရင် သွားတွေဖြူဝင်းလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၂. ပိုးမွှားတွေကို နှိမ်နှင်းနိုင်ခြင်း
ကရဝေးရွက်မှာ lauric အက်ဆစ်ပါဝင်တာကြောင့် အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကို သေစေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ပိုးမွှားအကိုက်ခံရတာမျိုးတွေအတွက် ကရဝေးရွက်ကိုခြေပြီး ဆီအနည်းငယ်နဲ့ ရောထားတဲ့အနှစ်ကို အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။
၁၃. ကျောက်ကပ်ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေခြင်း
ကျောက်ကပ်မှာပိုကူးစက်တာနဲ့ ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်တာတွေအတွက်လည်း ကရဝေးရွက်ကို အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။ ကရဝေးရွက်ကို ရေနွေးနဲ့ပြုတ်သောက်တာက ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်တာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကရဝေးရွက်မှာ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်နဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားအတွက် အကျိုးပြူပါတယ်။ အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက် ကရဝေးရွက်ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁၄. အရေပြားဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကိုသက်သာစေခြင်း
ကရဝေးရွက်က အရေပြားဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်တာ၊ အရေပြားပေါ်မှာ အနီအကွက်တွေဖြစ်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားရောဂါတွေအတွက် ကရဝေးရွက်ကို ရေနွေးထဲထည့်ပြုတ်ပြီး အငွေ့ကိုခံပေးနိုင်ပါတယ်။
ကရဝေးရွက်မှာအနာတွေကို ကျက်စေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ပိုးမွှားနဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့ အကောင်တွေ ကိုက်ခံရတဲ့ အနာတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်သလို ပြတ်ရှိဒဏ်ရာတွေနဲ့ အနာဆွေးတွေအတွက်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ကရဝေးရွက်ရဲ့ အင်းဆက်တွေနဲ့ မှိုပိုးတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းအာနိသင်က အရေပြားကူးစက်ရောဂါတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
ကရဝေးရွက်ရဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေက ဆံသာကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးပြုပါတယ်။ ဆံသားအတွက်ကရဝေးရွက်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁၆. ဆံပင်ကျွတ်တာနဲ့ ဗောက်ထတာကိုသက်သာစေခြင်း
ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ ကရဝေးရွက်ပြုတ်ရည် ခပ်နွေးနွေးလေးကို ဦးရေပြားအထိ ရောက်အောင်ဆေးချပေးတာက ဗောက်ထတာကို သက်သာစေပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်တာကိုလည်း သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကရဝေးရွက်အဆီကတော့ ဆံသားနဲ့ဦးရေအတွက် မသင့်တော်ပါဘူူး။ ပြုတ်ရည်ကိုပဲ သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
ခေါင်းမှာသန်းတွယ်နေရင် ကရဝေးရွက်တွေကိုခြေပြီး ရေနွေးနဲ့ပြုတ်လိုက်ပါ။ ဆံပင်အရင်းနားအထိရောက်အောင် လောင်းချပေးပါ။ ၃ နာရီကနေ ၄ နာရီလောက်ထားပြီး ခေါင်းလျှော်ချလိုက်ပါ။ ခေါင်းပေါ်ကသန်းတွေ လျော့သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကရဝေးရွက်မှာ အာဟာရဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ကရဝေးရွက်မှာ copper ၊ပိုတက်စီယမ်၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ဇင့်၊ သံဓာတ်၊ ဆီလီယမ်နဲ့ မဂ္ဂနိတွေလိုမျိုး ဗီတာမင်တွေကြွယ်ဝစွာ ပါရှိပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေအနေနဲ့ ကရဝေးရွက်ကိုစားသုံးမယ်ဆိုရင် တတ်သိနားလည်သူနဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကရဝေးရွက်က သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးတာကြောင့် ဆီးချိုဝေဒနာသည်တွေ အနေနဲ့ မိမိရဲ့သွေးချို ပမာဏကို သိရှိပြီးမှသာ စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ကရဝေးရွက်ကို ဆေးအဖြစ်ဆေးအဖြစ် သုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို သေသေချာချာစောင့်ကြည့်ပါ။
ကရဝေးရွက်က ပင်မအာရုံကြောစနစ် (CNS) ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ကရဝေးရွက်နဲ့မေ့ဆေး၊ ထုံဆေးနဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုမှာ အသုံးပြုတဲ့ အခြားဆေးတွေနဲ့ ထိတွေ့မိတဲ့အခါ ပင်မအာရုံကြောစနစ် (CNS) ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို တအား ကျဆင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့ရှိပါက ခွဲခန်းမဝင်ရခင် ၂ ပတ်လောက်အလိုကတည်းက ကရဝေးရွက်ကို ဆေးအဖြစ်မှီဝဲနေတာကို ရပ်တန့်ပါ။
ကရဝေးရွက်အခြောက်က အစာခြေအူလမ်းကြောင်းအထက်ပိုင်း သွေးယိုစီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကရဝေးရွက်မှာ အရေးပြားနဲ့ အမြှေးပါးတွေမှာ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Eugenol ပါဝင်ပါတယ်။
ကရဝေးရွက်နဲ့ ကရဝေးရွက်အဆီက ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။